Kojo Oppong Nkrumah - Wikipedia
Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.
Bere a ɔbaa aban mu
Ne ho asɛm
Kojo Vincent Oppong Nkrumah
5 April 1982 (1982-04-05) (age 39)
Akua Oppong Nkrumah
Sukuu a w'akɔ
Nsɛmtwerɛni, Amanyɔni, Mmranimfoɔ
Kojo Oppong Nkrumah ( Nawoda ne Oforisuo da etɔ so 5, afe 1982) yɛ Ghanani amanyɔni ne mmaranimfoɔ . ɔyɛ mmarahyɛ beguani a ogyina hɔ ma Ofoase-Ayirebi abatoɔ mpesua so
1 Ne mmɔfrase ho nsɛm
2 Adesua ho nsɛm
3 Adwuma ho nsɛm
Ne mmɔfrase ho nsɛm[sesa]
Wɔ woo Kojo oppong Nkrumah wɔ koforidua a ɛwɔ apuei fam wɔ Ghana. Nawofo ne Kwame Oppong Nkrumah ne Felicia Oppong Nkrumah. Na ne maame yɛ ɔkyerɛkyerɛfo na na ne papa nso kyerɛ ade nanso, akyire ogyae ade kyerɛ kɔyɛɛ adwuma wɔ sika korabea.
Adesua ho nsɛm[sesa]
Kojo hyɛɛ ne sukuu ase wɔ St. Brrnadette Soubirous a ɛwɔ Dansoma na ɔtoa so koo ntoaso sukuu wɔ Pope John Senior High School and Minor Seminary a ɛwɔ Koforidua. Kojo toa n'adesua no so kɔɔ sukuupɔn wɔ Cape Suapɔn no mu ma no gyee abodin krataa.
Wɔ afe 2012 mu no, Kojo wie Suapɔn a ɛwɔ Nkran mantan mu; University of Ghana ma no nyaa abodin krataa wɔ edwadie ho nsem mu.
Wɔ afe 2014 mu no, Kojo san nyaa abodin krataa a ɛfa mmaranim ho, a ɛyɛ (LLB) fi suapon a ne din Gimpa hɔ. Mfie mienu na ɔde suaa ade de gyee saa abodin krataa no.
Wɔ mfie 2016 mu, asemdibea kunini a ɛwɔ ɔman Ghana mu de abodin krataa maa Kojo se Ghana mmaranimfo
Adwuma ho nsɛm[sesa]
Kojo hyɛɛ n’adwumayɛ ase wɔ adwumakuo bi a ne din de British American Tobaco wɔ afe 2006 mu. Na saa adwumakuo yɛ tawa ho nnwuma. Ofii hɔ kɔɔ Joy Fm, kɔyɛɛ adwuma sɛ nsɛm kyerɔ wfo ma wɔ faa no sɛ otitenani ma wɔn anɔpa dwumadie, bere a nea na odi saa dwumdie a ne din de Komla Dumor afiri hɔ no. wɔ afe 2014 mu no, Kojo de ne dwumadie no too hɔ na obue ɔnoa nadwumakuo a wɔ frɔ no West Brown Stone Capital.
Wɔ afe 2016 mu no, na wahyɛ ase yɛ adwuma sɛ mmaranimfoɔ wɔ mmarahye adwumakuo a wɔ fre no Kulendi, Attefuah and Amponsah.
Wɔ afe 2015 mu no, Kojo Oppong Nkruma kogyinae wɔ NPP din mu sɛ wɔnto ne so aba, na watumi abɛyɛ mmarahyɛ beguafo a ogyina hɔ ma Ofoase-Ayirebi abatoɔ mpesua so wɔ Ghana . Odii nkunim wɔ 2016 abatuoɔ no mu . Sesei, ɔresom sɛ ɔsoafo a ɔhwɛ amaniebɔ so wɔ Ghana. ɔyɛ kasamafo ma aban no wɔ sikasem ho amaneɛbɔ ho. ɔka ekuo bi a ɛwɔ mmarahye begua mu a wɔhwɛ sikasɛm ho ntotoe ho.
Wɔ afe 2015 mu no, Kojo Oppong Nkruma kɔgyinae wɔ NPP din mu sɛ wɔnto ne so aba, na watumi abɛyɛ mmarahyɛ beguafo a ogina hɔ ma Ofoase-Ayirebi abatoɔ mpesua so wɔ Ghana . Odii nkunim wɔ 2016 abatoɔ no mu . Sesei, ɔresom sɛ ɔsoafo a ɔhwɛ amaniebɔ so wo Ghana.ɔyɛ kasamafo ma aban no wɔ sikasem ho amaneɛbɔ ho. ɔka ekuo bi a ɛwɔ mmarahyɛ begua mu a wɔhwɛ sikasem ntotoe ho.
Kojo yere din de Akua na ɔne no wɔ mma mienu. Wɔn din de Kwaku ne Afua
↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 2312: attempt to call upvalue 'extract_ids' (a nil value).
↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 3540: attempt to call upvalue 'set_error' (a nil value).
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Kojo_Oppong_Nkrumah&oldid=34973"
Pii expanded collapsed
Nsesae ba kratafa yi so da 12 Ɔpɛpɔn 2022, mmere 16:23.
Obi a ɔma biribi tu mpɔn